Xeeladihii iyo tabihii cabdi Iley adeegsanayey oo soo xidhmay. – Xeernews24
Xeeladihii iyo tabihii cabdi Iley adeegsanayey oo soo xidhmay.
26. Dezember 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Cabdi maxamed cumar waa madaxwaynihii ugu waqtiga dheeraa ee deegaanka soo mara. Waxaa uu deegaanka madaxwayne ka ahaa 7dii sanadood ee la soo dhaafay. Inuu mudada intaas le’eg haysto deegaanka maxaa cabdi u suurto galiyay?
Waxaa laga yaabaa inaad is tidhaahdid malaha wuu ka aqoon badan yahay madaxwayneyaashii ka horeeyay, waxaa laga yaabaa inaad is tidhaah malaha wuu ka caqli badanyahay dadkii ka horeeyay, waxaa lagayaabaa inaad is waydiiso malaha wuu ka geesisanyahay, ama waxaa lagayaabaa in aad ku fikirto wuu ka taliyayaal fiicanyahay kuligood.
Hadaba intaynaan go,aan is ka qaadan oo aynaan is ka dhihin sababtu waa sidaa, waxaan u baahanahay inaan qiimayno dhamaan sababaha aan kor ku soo sheegnay inagoo ilaalinayna itigis ka qoraalka kana taxadarayna inaan cadaalada ka tagno oo aan sabab aan caday lahayn wax ku cabiro.
Bal aan fiirino aqoonta cabdi. Cabdi waxa uu ka baxay dugsi dhexe waxaa uu ka qalin jabiyay jaamacad open university distance learning ah inta aan xaqiiqadeeda ognahay. Waxaa aan marar badan maqalaa cabdi waxa uu phd ka qaatay Addis Ababa universaty laakiin cadayn waan u waynay.
Dhanka caqliga cabdi waa nin leh calaamooyinkan laxidhiidha caligiisa. Waa nin qar iska tuur ah oo aan libiqsan waxa uu maagan yahyna jecel inuu gaadho wax kasta oo ay ugu kacayso. Wax celiya oo xeer islaam iyo xeer gaalaad, mid bilu’aadan iyo mid xayawaan ah ma jiro. Waxaa uu ku kacay wax horeyn iyo dabadayso cariga soomalida cid masuul ah ama madax ah oo ku dhaqantay aanay jirin xataa All-Shabaabka ugu liidatana ha noqotee.
Cabdi waa nin balwadle oo Waxaa uu cabaa khamrida, waxa uu laayaa oo uu uus xabaala dad masaakiin ah oo aan waxba galbsan. Waxa uu sharciyeeyay in gabdhaha soomiyeed lafara xumeeyay iyadoo loo eersanayo hebel baad walaala tihiin ama aad qoys tihiin, waxaa la dhacaa hantida gaarka looyeeyahay, waxaa laxidhaa dadka iyagoo aan wax danbi ah galin, waxa uu samaystay kornaylo iyo ciidan dad qal ah oo aan wax ay ka naxaan ama ka xishoodaan aanay jirin,
waxaa dadka laga caayaa Tv iyo media ha uu gaarka uu leeyahay, waxaa isugu mida xaaraanta iyo xalaasha, dulmi hadii uu noocyo lahaa waxa uu astaan u yahy maamulkiisa, cabdi waa qabyaladaystihii qarniga 21 mana maqal mana akhriyib mana arag qof ka qabyaalad badan marka laga reebo hitler, salaad ma tukado diinta muslimkana waa lacol. TV dawlaldana waa uu ka dhaariyay in quraan lagu furo ama cashir maalinta kaliya xataa laga siidaayo ugu danbay cabdi waxaa uu aaminsanyahay sixirka iyo faaliyayaasha, waxaana la odhan karaa maskaxda kama fayowba. Tani waxay ku tusinaysa heerka caqli ee uu cabdi ku maamulo deegaanka.
Hadaan jaleecno in cabdi geesiyahay iyo in kale, waxa uu leeyahay dhamaan calaamadaha uu qofka aadka u fulayga ahi leeyahay. Hadii kuyar oo kuraya ama foodlay ahi facebook kala soo hadalqaado ama ehkeed buu xidho oo uu la soo hadashiin ama lacag buu u balnqaadi, hadii halmaalin tigreegu u hanjabana guriga ka soo biximaayo,
Hadaan eegno xaga lataliyayaashiisa, waxaa hogaanka u haya kornayl ciro waa cornal nabadsugidii soomaaliya ah waa ninka ka caawiya nidaamka ciqaabta, bah dilka aargudashada iyo xogta sirdoon ee ay ula bexeen madax jabin, cornel Cabdikariin Qalinle waa taliyihii maxkamada badbaada qaranka gobolada waqooyi galbeed soomaaliya waa nin ku sifoobay dhuuniqaate afmaal ah kuna ciroobay cawaaqib xumo, Cali cabdi Ciise waa shaqsigii ku riyoon jiray qabiil nacabka marka uu hurdo, waa lataliyihii Iid Daahir Faarax oo ay farihiisa ka da’ayaan diiga 70,000 oo qof oo u dhashay deegaanka qaarkoodna ilaa hada laga war hayn raq iyo Ruiz,. Ina laba go’le waa askari ciidamdii soomaaliya ah waa xubun ONLF, waa dambiile dad badan xasuuqay intuu xilka hayay, waana ka kula taliya laynta dadka. Waxaa uu shaqaale u qortay dad aan aqoon iyo xirfad fiican u lahayn shaqada oo dhamaan qarabadiisa ah, waxaa uu baarlamaankii ku soo ururiyay kuray iyo foodlay isaga u sacabtuma oo uuna shaki ka qabin inayna hal suaala waydiinayn, haday waydiin lahaayeena aan garanayn waxay baarlaman u yihiin. Taasina waxay ku tusinaysaa rakaab xumadiisa.
Su’aasha meesha talaa ayaa ah sidee ayuu cabdi ugu guulaystay mudadaa dheer inuu xilka kunagaado hadiiba xaaladihiisu sidaa u yaalaan,
Aan kuu bidhaamiyo waxa cabdi ku saaciday inuu xukunkiisu daba dheeraado;
Horta cabdi Waxaa uu ku soobeegmay iyadoo dhaqaalaha wadanku uu marayo meel aad u saraya, dawlada Itoobiya yana ay muctaad u tahay qof ay hogaanka deegaanka u dhiibto oo ka soo afjara nabad diidka ONLF, iyadoo ay ubaahatay in siyaasadeeda dibadu ay marayso meelxun, waxaa loo bahnaa qof beesha ogaadeen ka soo jeeda oo aan cidna unaxay una aabo yeelayn. Iyadoo kililada loo ansixiyay in la abuuro ciidan gaara oo sida milatariga u tababaran oo loo adeegsado hadafka TPLF ee laynta iyo cabudhinta ku salaysan, in la helo dad fuliya nidaam cusbaa oo loogu talogalay jaaliyadaha dibada iyo iyadoo ay dawladu rabtay inay ka hortagto casriga cusub ee media ha ku salysan oo ay u arkaysay khatar ku soo fooleh oo hadana wadanka jilbaha u dhigtay burbur.
Cabdi Waxaa uu buuxiyay dhamaan shuruudihii ay raadinaysay Itoobiya mudada dheer oo ahaa
Damiir laawe u ooman xukun kaligii talis ah aanay u muuqan waxkale.
Diinlaawe lagu dhalanrogo umada islaamka ah si loo baro dhasnto, duminta maamulka masaajida, xidhida madarisadaha, cabitaanka khamrida iyo druga, fisqiga iyo tumashada iyo faafinta dhilaysiga.
Dhaqan laawe umada kala dagaalma sharafta, dadnimada, sharafta, dhowrsanaanta iyo akhlaaqda fiican.
Daalim umada ku xukuma nin jeclaysi, cadaald xumo, uus xabaal, boobka iyo dhaca umada iyo hantida dawlada.
Musuqmaasuqe deegaanku Waxaa uu gaadhay heerkii aduunka ugu sareeya musuqa waxaa qaybsada hantida umada qoys iyo saraakiisha ciidamada qaranka oo boorsado loogu geeyo harar iyo fadaraalka oo mudo dheer ilaalinyay.
Maamul xumada deegaanka waxaa lumay dhamaan waxii xukun sharci ahaa iyo dhamaan waxii isla xisaabtan ahaa. Waxaa meesha kabaxay dhamaan hayadihii garsoorka ee cadaalada ilaalinlahaa, hantidhowrkii hantida ka ilaalin lahaa In lalunsado, CPA shaqaalaha xuquudooda dhowri lahay , ciidankii booliiska ee nabadgaliyada shacabka ilaalin lahaa, xafiiskii cadaalada ee danbiga baadhi lahaa, gudigii qandaraasyada ee shirkadaha si xaq ah u tartansiin lahaa, xafiiskii maaliyada ee miisaniysa dabagali lahaa hubina lahaa In si sharci ah loo isticmaalay.
Cabdi Waxaa uu fuliyay waxyaabo badan oo laga waayay dhamaan intii xilka uga horaysay;
Calankeena waxa uu ahaa cagaar, Cadaan iyo casaan uu gees kasoogalo gees buluug ah oo xidig cad ku dhextaalo, calaamaduna waxay ahayd caleemo ay dhexda ugu jirto kitaabka quraanka ah maadaamoo aan muslim nahay.kililka waxaa shaqaaluhu fasax ahaan jiray jimce iyo axad.Hogaanka EPRDF waxaa u cuntami waayay in calankeena qayb soomaaliya calenkeeda u eg ku jirto,in calaamadeena ay ka muuqato shacaar diini ah iyo in maamlinta islaamka ee jimcaha fasax lanoqdo, waxayna raadinayeen cidii sadexdaas arimood u fulin lahaa oo waliba sadexdoodaba ku badalilahaa kuwo shacaarka diinta kiristanka gaar ahaan orthodox ka muuqato.
Dhamaan wuu badalay oo waliba Waxaa uu ku datsaday ladagaalanka diinta muslimka oo uu uguntaday inuu raadkeeda baabi’iyo.
Akhristoow hadaad muda badan is waydiinaysay waxa uu cabdi maxamed cumar uga dul cagaaraa kursiga madaxwaynaha waxay ahayd Waxaa uu hayay hawl aan nin kale qabteen oo aadan adigu qabteen oo uuna qof soomali ahi damiirkiisu siiyeen.
Ma waxay kula tahay in maamulka xaylemaaryan iyo kii ka horeeyayba ayna ogayn dhibaatada sida volcano ha uga soo muuqatay geeska afrika ayna ogayn? Wadanka intaas leg sirdoon koodu aadka u dhisanyahay in dawlada fadaraalku ayna war ka hayn? Hadaad sidaas u haysato ama waxaad u baahantahay dhaqtar maskaxda ah ama waxaad nooshahay xiligii Stone Age ka.
Hadaba dhamaan xeeladihii iyo tabihii way soo oodmeen kadib markii wadanku cagaha lagalay qulqulado siyaasadeed iyo nabadgaliyo xumo baahsan, markii sarayntii awoodeed ee TPLF ka socon wayday oromo iyo axmaaro, markii saraakiishii uu ku tiirsanaa iyo mafiyadii hogaanka u gaysay TPLF laga takhalusay oo shacabka tigray u arkay inay ka gudbeen ujeedadiid loo aasaasay una isticmaalayaan dhiigii wiilashooda iyo gabdhahoodii udhintay xoriyad iyo sinaan ayna u soo jiideen nacab iyo colaad ka badan tay iyagu u qabeen dargiga. Kadib markii uu la saftay maamulka tigreega oo ay qulqula xuquuq raadisihi kala dhexeeyeen Axmaarada, kadib markii loo adeegsaday in lagu madax jabiyo shacabka oromada ee dadaalka ugu jira inay helaan xuquuqdoodii aasaasiga ahayd. Taas waxaa dheer in uu dagaalo ka oogay xuduudaha oromada aan lawadaagno, inuu barakiciyay shacabka jaarso oo aan walaalaha nahay, kadib markii umada dagta deegaan ay cabsidii ka dulqaadeen gole qurbajooga oo ka soo jeeda jigjiga iyo dhagaxbuur,
Kadib markii EPRDF ku heshiisay in lagala wareego awooda nabadgaliyada deegaan lana qiimeeyo dhamaan tacadiyadii uu gaysta mudaduu xukunka haday.
Waan hubaa inay maskaxdaada ku soo dhaday cabdi tagye xageebuu ku noolaan doonaa iyadoo ay joogaan dadkii uu dadkooda laayay, xidhay, faraxumeeyay, garaacay ama uu hantidooda boobay?
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/Cabdi-iley-odey.jpg 784 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-26 13:22:302017-12-26 13:22:30Xeeladihii iyo tabihii cabdi Iley adeegsanayey oo soo xidhmay.
Akhriso: Aragti ururintii ugu horreysay ee laga sameeyey todobo Arrimood oo... Kooxda kubadda cagta ee Jaaliyadda Soomaalidda Magaalada Münster ee dalka Jarmaalka...